Metal Tafura Makumbo Vagadziri | China Metal Tafura Makumbo Suppliers & Factory
Metal Tafura Makumbo 28 x 25.6 Inch Dining Tafura Makumbo
Metal Tafura Makumbo 28 x 25.6 Inch Dining Tafura Makumbo Anorema Duty DIY Simbi Furniture Makumbo Square Industrial Country Style Tafura Makumbo eHome Office Bench Computer Desks Matema
【Hombe Saizi】 28.4”kureba uye 25.6”yakafara.Itai kuti tabletop yacho ive yakasimba kuti ishandiswe zuva nezuva kumba kana muhofisi.
【Huremu Hukuru Kutakura】Kutakura kwakasimba.Kurema kwegumbo rega rega kunosvika 1000lbs. Kugona kumira nezvinhu zvinorema.
【Yakasimba Simbi Kuumbwa 】Nisorpa Square tafura makumbo akagadzirwa nesimbi yemhando yepamusoro. Yakanyatso welded, isina screws mukati, chengetedza kugadzikana kwemakumbo etafura yesimbi. Idzi makumbo etafura yesimbi Yakanaka zvinhu zvichaichengeta muchimiro chakanaka kwemakumi emakore.
【Widly Application】 Yedu makumi maviri nesere mumakumbo efenicha yaive mutema dhizaini, kutaridzika kwefashoni, yakanakira matafura ekofi, matafura epadivi, sofa, kabati, maTV, matafura ekupedzisira, nezvimwe.
【100% inogutsa inovimbiswa】 Kudzoserwa mari kwakazara kana kutsiva kutsva kunogona kurongwa kana makumbo ako etafura yeskweya akakanganisa. Ndokumbirawo muzivise pachena pane zvirikunetsa.
22 ″ Metal Hairpin Kofi Tafura Makumbo
Kuwedzera Floor Protectors: paunotenga seti yepakati-yemakore emazuva ano makumbo iwe zvakare uchawana seti yerubha tsoka! Zvishandise kuchengetedza pasi rako kubva pakukuvadzwa kana sekuwedzera kudzikamisa kune iyo chigaro chinozunguzika kana tafura.
28Inch Hairpin Tafura Makumbo ane Heavy Duty Metal Makumbo eFenicha Mid-Century Makumbo emazuvano eDi...
28Inch Hairpin Tafura Makumbo ane Heavy Duty Metal Makumbo eFenicha Yepakati-Century Makumbo emazuvano eKudyira uye Kupera Tafura,DIY Projects.
Material: Yakagadzirwa nesimbi inotonhora yakakungurutswa uye yakavharidzirwa poda pakupera kwedema, Max simudza 330 lbs.
Dhizaini: Shandisa hairpin tafura makumbo kugadzira uye kugadzira zvidimbu zveimba uye kuita kuti ive yakasarudzika.
Zvishandiso: Nekutarisa kwepakati pezana ramakore, unogona kuwedzera hunyanzvi hweindasitiri kune tafura yechinyakare uchishandisa simbi makumbo ebhenji kune akasiyana mapurojekiti eDIY. Inogona kushandiswa kune zvigaro, matafura ekofi, mabhenji, uye chero fenicha iri pakati.
Kuiswa: Yedu tafura yekudyira makumbo anouya aine maburi akacherwa uye screws saka kuisirwa kunokurumidza uye kusingarwadze kune ese hunyanzvi mazinga.
Floor Protector: huya nemakumbo mana emahara erabha kuti udzivirire pasi rako kubva pakukuvadzwa kana seyekuwedzera stabilizer kune iro rinozunguzika dhesiki kana tafura.